Cryolipolysis shockwave shock iliza cellulite crioshock umatshini njengoko-cs3+-Cellulites nokususwa umatshini-Hunan Astiland Zonyango Aesthetics Iteknoloji Co., Ltd.
Umdibaniso wonyango lwe-Cryolipolysis kunye ne-Showwave Therapy yeyona teknoloji yamva kunye neyokuqinisekiswa kweekliniki kushishino lokunciphisa amafutha.
Ukudityaniswa kwe-Cryolipolysis kunye ne-Shockwave Therapy yeyona teknoloji yakutshanje kunye nengqina eqinisekisiweyo kwishishini lokunciphisa ioyile.I-Cryolipolysis, ekwabizwa ngokuba yinkqubo yokupholisa amanqatha, kunye nonyango lwe-Acoustic Shockwave qinisa uzuze. Inkqubo yanciphisa kakhulu ukujikeleza kwiindawo eziphathwayo, kunye nokunciphisa ukutyeba kwamafutha. Yindlela ekhuselekileyo, efanelekileyo, nesebenzayo yokuthambisa umzimba wonke.
I-Cryolipolysis yokuFumaneka kwamafutha
I-Cryolipolysis isebenza ngokukhulula iiseli zamafutha ukuya kwinqanaba lokupheliswa kwendalo. Iqondo lokushisa elibandayo lichoboza iiseli ezinamafutha kwaye umzimba uzisuse ngokwazo. Ngelixa iiseli ezinamafutha zitshatyalalisiwe, ulusu olujikelezileyo kunye nolwakhiwo luhlala lukhuselekile kwaye lungenzakali. Ukuba usokola kwi-bulges yamafutha okanye unamafutha agqithisileyo nangona ulandele isicwangciso sokutya kunye nokuzivocavoca, unokuba ngumgqatswa olungileyo we-Cryolipolysis. Eyona njongo iyonke yenkqubo yokuhamba kwamafutha kukucutha umthamo wamaqhekeza amanqatha nto leyo ibangela ukuba umzimba ube mncinci kwaye ube nomzimba omncinci.
I-Acoustic Shockwave yokuNcitshiswa kweCellulite
Ngaphandle kokophula i-deposits yamafutha, unyango lwe-acoustic wave lunokukhupha i-cellulite engalunganga. Unyango lweShockwave cellulite lubonelela ngokukhupha amafutha akhuselekileyo ukuze luqine kwaye luphume nolusu. Isebenza ngokukhupha uthotho lweeapoustic pulses ezihambisa izihlunu ezisebenzayo kwiindawo ezinobunzima beeselulosi kunye namadiphozithi emafutha.
I-1.Cryolipolysis kunye neteknoloji edityanisiweyo
I-2.3 cryo handwork isebenza ngaxeshanye (4 ukhetho)
I-3.Total 8 ubukhulu bentloko yesisu, ithanga, ingalo, umva, isinqe, ukunyanga.
Ukuyilwa kwesixhobo sokupholisa kukukhulu okungama-4.360 °
5.Shockwave ngesandla esi-2 ubungakanani obuhanjiswa bokuthambisa umzimba
6.Inkqubo yokupholisa ephezulu
1-6 Ibar @ 0.1Bar
Iitransmittha ezi-2 (i-R15, D20)